Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho
Qaraxa oo jugtiisa laga maqlay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir ayaa waxaa uu ka dhacay agagaarka Dugsiga Sare ee Banaadir oo kuyaalla inta u dhaxeysa Isgoyska Tarabuunka iyo Madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim.
Qaraxa oo wararka qaar ay sheegayaan in uu ahaa Gaaei wadada dhinaceeda la dhigay ayaa waxaa ka dhashay qasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Xilliga uu qaraxa dhacayay ayaa goobta waxaa ay aheyd mid mashquul badan, waxaana taagnaa Gaadiid Basas ah oo ay saarnaayeen Arday farabadan oo u socday Iskuulo Goobta ku yaalla.
Faah faahinta qaraxa kala socda www.radiorisaala.com.
Previous articleGuddiga doorashooyinka oo sheegay inay cabasho soo gaartay baaqna jeediyay
Next articleSAWIRO:- Faah faahin qaraxa ka dhacay Muqdisho